Ọbọ ọbọgwụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ọbọ ọbọgwụ
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na ndị nwere nkata onwe ha, ụmụ anụmanụ na-azụ anụ n'ụlọ. N'ihe enwere ihe ngbadoro zuru ezu iji tinye aka n'inwe anu ohia adighi adi ike, karia ebe uru nke oru di otua di. Ọ bụghị nanị na ị nwere anụ anụ, ma ị maara ihe niile gbasara mmalite ya.
Ihe kachasị mkpa banyere ịzụlite Bashkir ducks n'ụlọ
A na-ewere ọbọgwụ Bashkir dị ka otu n'ime ụdị anụ kachasị mma nke àkwá na anụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị oke nlekọta na nlekọta, ọ dị ọnụ ala, a na-ejikwa ya siri ike na ntachi obi. Ihe ndị a na-eme ka ọ bụrụ na ị na-etolite ọbọgwụ Bashkir ahụ, a ga-atụle uru na ọghọm ya na ihe a. Nkọwa nke oke Kpọpụta anụ ọkụkọ na-amalite na nkọwa dị nkenke.
Otu esi eme ka umu anu ocha na-acha uhie uhie choro n'ulo
Taa, anyị na-enye anyị ohere ịṅa ntị na mmasị na-acha anụnụ anụnụ nke ndị ọrụ ugbo na-ahụkarị n'ọhịa nke anụ ụlọ: ịmara ihe dị iche iche nke ọbọgwụ, nkọwa nke uru ya na foto dị iche iche. The Favorite Blue na-abụ otu ìgwè nke ọbọgwụ nke na-adịbeghị anya banye ahịa ma na-ewu ewu pụrụ iche n'etiti ndị ọrụ ugbo.
Otu esi echekwa kpakpando Star-53 n'ụlọ
Ihe gbasara isiokwu nke taa bụ ọbọgwụ kpakpando Star-53, bụ nke a na-akpọ "Peck duck". Nke a bụ ihe ọzọ dị iche iche na anụ ụlọ nkịtị, dị ka ọchịchọ nke ịkwaga n'ọnọdụ ndụ siri ike na-agba anyị ume ịjụ nri ndị nwere abụba. Peck duck na-enye ezigbo nri dị ụtọ, ma ọ bụghị abụba anụ, nke dị iche iche àgwà.
Esi eme ka umu akpa Peking n 'ulo
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na ụlọ ulo ozuzu okuko wee kpebie ịmalite ahụmịhe gị na ịzụlite nwa, "peking" bụ nhọrọ kacha mma ịmalite! Nke a bụ nke ochie, nke a na-egosi ụdị anụ ọkụkọ anụ, bụ nke a na-eji nke ọma emepụta ozuzu maka ịzụlite ọtụtụ ụdị ọhụrụ. A na-eri nri ndị a n'ebe ọ bụla ma na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na obere ugbo, ha enwetawokwa otuto dị ukwuu n'ihi na ọ dịchaghị mma, ọganihu ngwa ngwa na anụ dị ezigbo ụtọ ma dị mma.
Gogol ọbọgwụ: foto na nkọwa
Gogol ọbọgwụ bụ nnụnụ nke ọbọgwụ na-enwe ezigbo ebe obibi na nke na-egbukepụ egbukepụ, nke a na-ewere na ọ bụ otu n'ime ụdị anụcha kachasị mma nke ezinụlọ ya. Ebe nnụnụ a na-edozi, ihe ọ na-eri na ihe ndị dị na ụzọ ndụ ya - a ga-atụle ihe ndị a na ndị ọzọ n'ihu n'ihu. Nkọwa na njirimara nke ụdị ndị ahụ Gogol bụ Gogol bụ nnukwu mmiri na-agba mmiri na ọdịdị dịpụrụ iche pụrụ iche.
Duck gafere na ọgazị: nkọwa nke Mulard duck ìgwè
A na-enweta udiri anumanu anumanu ndi ozo iji meziwanye ihe ngosi nke oru, iji kpoo uru nke udiri anumanu di iche iche, iji mee ka adighi nma. A na-etinye isiokwu a na ngwongwo Mulard, n'ime ya anyị ga-amata akụkọ ihe mere eme na nkọwa nke ụdị, yana ihe nzuzo nke na-eto eto. Agba akụkọ ihe mere eme bu okwu "mulard" nke sitere n'asusu Bekee ma si n'aha "Muscovy duck" na "nwe nwe", nke putara duck na onye nwe ya.
Bashkir Ducks: Njirimara, Pros na Cons
Onye nwe ugbo ọ bụla ọ na-ahụ n'oge na-adịghị anya iji kpebie ụdị ụdị anụ ọkụkọ ọ bụ ihe dị mma ma na-echekwa na ọ na-arụ ọrụ ma na-arụzi ya. Ma ọ bụrụ na i nweworị ma ọ bụ nwee ọkụkọ, turkeys, geese, ọbọgwụ, karịsịa ndị nnọchianya nke ndị Bashkir, bụkwa nhọrọ dị mma maka anụ na ngwaahịa akwa.
Obere akpụkpọ anụ bovard: nkọwa nke cross, peculiarities nke idebe n'ụlọ
Blagovarskaya duck bụ nnụnụ, ọ bụghị nanị na ọ na-achọ ọ bụla yad na ọdịdị mara mma, ma nwee ike ime ihe dị ukwuu na àkwá na anụ dị ụtọ. Ihe dị mfe ma dị egwu na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe mgbakwunye na ndị ọrụ ugbo na ugbo. Mmetụta dị jụụ, ezigbo arụpụta ihe, iguzogide ọrịa - ihe a nile na-eme ka ọbọgwụ ahụ bụrụ anụ ọkụkọ dị ebube.
Ụgha nke akpa Cayuga: esi elekọta na otu esi eri nri n'ụlọ
Ọmarịcha mara mma nke America bụ Cayuga bụ onye na-emekarị ngosi ihe omumu nke mba ụwa. Nke a abughi ihe mgbagwoju anya, n'ihi na umu oji ya di iche iche na agba ohia na-eme ka o di iche n'etiti umu anumanu ndi ozo. Otú ọ dị, ọdịdị ahụ abụghị nanị uru nke nnụnụ ahụ, ọ na-enwekwa ọnụ ọgụgụ dị elu nke arụpụtaghị ihe, ọ na-eburu ya nke ọma, anụ ya nwekwara ihe dị nro, nke na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ.
Broiler duck agidel: atụmatụ nke ozuzu n'ụlọ
Okwu ahụ "broiler" na-echeta ozugbo ọkụkọ, ọ bụ ezie na ọ bụ anụ ọhịa na-akpa. Otu n'ime ihe ndị a bụ snow agwụl na-acha ọcha snow. Ndị nnọchiteanya nke obodo a na-eto nke ọma n'ugbo na n'ụlọ. Nkọwa na ọdịiche dị iche iche nke ụdị anụ ọhịa na-adọkpụ Broiler, nke sitere na nchikota nke ụdị dị iche iche, na-ejikọta uru ha kachasị.
Nkọwa ọhụụ cross temp
Mgbe ị na-ekpebi ịzụ ụmụ anụ ụlọ, nke mbụ ọ dị mkpa iji chọpụta ụdị ahụ, n'ihi na dabere n'ógbè a, ọ bụghị ụdị ọ bụla nwere ike ịdị mma. Temputere Temp bụ onye na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha snow, nke nwere mmetụta dị ukwuu n'ókèala Ukraine, Russia na Belarus.
Ndị na-agba ọsọ India (onye na-agba ọsọ): atụmatụ nke ịzụlite n'ụlọ
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, mmasị na ịzụlite ndị na-agba ọsọ na India na ndị ọrụ ugbo na ndị ọkụkọ na-azụ anụ arị elu. Nke a abughi ihe mgbagwoju anya, n'ihi na nnunu nwere ude ncha mara mma ma mara ya maka nkpuru obi di oke nma ma di nma. Otú ọ dị, ịzụlite ọbọgwụ ga-aga nke ọma ma ọ bụrụ na a hụ ụfọdụ iwu na ọnọdụ ụfọdụ.
Kedu ụdị ọbọgwụ dị
Mgbe ụfọdụ, ịhọrọ ụdị nnụnụ na-azụ anụ ụlọ na-aghọ nsogbu, n'ihi na ụwa dị ihe dị ka 84. Anyị na-adụ ọdụ ka ị kọwaa n'ụzọ doro anya ihe ebumnuche nke nnụnụ. Ọ bụrụ na isi ihe mgbaru ọsọ bụ inweta anụ, mgbe ahụ ọ bara uru ịhọrọ ụdị anụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta nsen n'aka nnụnụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eleba ụmụ nnụnụ akwa.
Idebe na azụlite ozuzu ozuzu ulo na ulo
E nwere ụdị nnụnụ ndị a na - akpọliteghị maka anụ ma ọ bụ àkwá, kama n'ihi ụda olu ha dị oke egwu - ndị a bụ ọbọgwụ duck. Ha bụ ndị na-enyere ndị dinta aka n'inweta anụ ọhịa ọhịa, na-adọta ha na ụda olu. Ka anyị mụtakwuo banyere otu esi ahọrọ, ilekọta na ịzụ ụmụ nnụnụ dị otú ahụ.
Kedu otu esi eme ka ụmụ obere akpa na-akpagharị n'ụlọ
A na-akpọ ndị na-akpọ Broilers ka ha na-emepụta ụdị anụmanụ ndị na-esite n'aka anụ. Akpụkpọ anụ Broiler, dịka ọkụkọ, na-enweta ngwa ngwa, nke na-enye ohere ka ọnwa 1.5 gasịrị mgbe ịzụta ụmụ ọbọgwụ kwa ụbọchị ka ha too okenye. Mgbe ahụ, anyị ga-ekwurịta banyere nhọrọ nke ndị na-eto eto na-eto eto na ịmepụta ọnọdụ dị mkpa maka nhazi ya.
Nkọwa nke isi awọ nke Ukraine
Ọ bụghị nanị na ugbo anụ ọkụkọ, kamakwa n'ọtụtụ yards tinyere ọkụkọ na-enwekarị ọbọgwụ. Otutu nkume di oke. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere ọbọ ojii isi awọ Ukraine. Mmalite nke isi ojii Ukrainian akpụkpọ anụ Nke a bụ ọbọgwụ sitere na ndị ọkachamara nke Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwurugwu Ukrainian nke Ukraine.
Nkọwa nke obere ọbọgwụ uhie Ogar
Mgbe ụfọdụ, na ọdọ mmiri ma ọ bụ n'ụlọ ndị mmadụ, a pụrụ ịchọta ọmarịcha agba nke agba mmanụ agba. A kama nnukwu nnụnụ na-adọta uche, ndị mmadụ na-echekarị banyere mmalite na ebe obibi ya. Taa, n'isiokwu a, anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu banyere ọbọ ọbara ọbara na nzụlite ya. Mmalite na nkesa nke Red Duck, ma ọ bụ Ogar, bụ onye nnọchianya nke ezinụlọ Duck, nke Anseriformes.
Nkọwa nke broiler breeds ducks
Nnukwu ewu n'etiti ndị ọrụ ugbo na-anụ anụ ọkụkọ bụ brock brocks. Ha na-enweta ngwa ngwa n'ugwu, ọ dịghị mkpa itinye ego dị ukwuu n'ime nnụnụ ndị a, ha na-enye anụ dị oké ọnụ ma dị ụtọ. Ka anyị lebakwuo anya na ụdị anụ ọhịa broiler na-adịkarị, otú e si azụ ha ma lekọta ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Nkọwa nke oke nke ndị Hungarian ducks
Taa, n'ụwa, dị ka ọnụ ọgụgụ ndị UN bipụtara si kwuo, e nwere ụdị anụ ọhịa iri asatọ na asatọ nke anụ ụlọ. E kewara ha niile n'etiti ebe atọ: anụ, anụ, akwa na akwa. Onye na-azụ anụ ọkụkọ kwesịrị ịhọrọ ụdị anụ ụlọ maka idebe ihe mgbaru ọsọ ya - inweta anụ, anụ na àkwá, ma ọ bụ naanị àkwá. Anyị chọrọ ịme ka ị bụrụ onye nnọchianya nke ụdị anụ - Hungary duck.